‘मौलाएको ठेक्कापट्टा’ मा दोहोरी कलाकारको ‘दोहोरी’ - Parichay Network
‘मौलाएको ठेक्कापट्टा’ मा दोहोरी कलाकारको ‘दोहोरी’
सन्तोष बस्याल द्वारा	 २४ पुष २०७६, बिहीबार १५:३५ मा प्रकाशित
सन्तोष बस्याल, पोखरा । पोखरामा मेला महोत्सव भईरहँदा अक्सर सुन्ने गरेको शब्द हो ‘मौलाएको ठेक्कापट्टा’ । सो विषयमा कलाकारलाई आक्रोश पोख्ने ठाँउ बनेको छ, फेसबुक । प्रत्यक्ष कुराकानी राख्न नसक्नेले यसमा सजिलै कुण्ठा पोख्न सक्छन् । मेला महोत्सवको सिजन सुरु भएदेखिनै राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान गण्डकी प्रदेशको नेतृत्वले ‘मौलाएको ठेक्कापट्टा’को आरोपलाई झेल्नुपरिरहेको छ ।
प्रतिष्ठानमा आवद्ध कलाकार यतिधेरै छन् कि सबैलाई एउटै महोत्सवमा समेट्न गाह्रो छ । यता महोत्सवका आयोजक संस्था भने चलेका कलाकारको खोजीमा रहन्छन् । तर कतिपय कलाकारलाई एउटै गीत रेकर्ड गरेको भरमा स्टेज चाहिन्छ । ‘स्टेज नदिएको होइन, स्टेजलाई ह्याण्डलिङ गर्ने क्षमता नहुँदा समस्या आएको छ’, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान गण्डकीका अध्यक्ष सुरेन्द्र गुरुङ बताउँछन् ।
‘संस्थाभित्र सबै कलाकार हुनुहुन्छ, सबैलाई सबै ठाउँमा सम्झिन खोज्दा गाह्रो हुने, नसम्झिए साथीहरु आक्रोश पोख्नुहुन्छ’, उनले भने, ‘गरे पनि सुख छैन नगरे पनि सुख छैन ।’
फेसबुकमा स्थानीय कलाकारको पक्षमा गायक केशब घिमिरेले स्टाटस लेखे । उनले लेखेका छन्, ‘जब जब मेला महोत्सव आउछँन, स्थानीय कलाकार र त्यही ठाउँबाट राष्ट्रिय स्तरमा पुगेका कलाकारलाई स्थान दिइदैन, ठेकदारले आफ्ना मुठी भरका कलाकारलाई मात्रै बोलाउने गर्छन् । नाङ्गो राजनीति हुन्छ । तब मात्रै विरोध हुन्छ ।’
उनले आफ्नो स्टाट्समा उक्त विषय नयाँ नभएको र केही वर्षदेखि हुदैँ आएको बताएका छन् । घिमिरे प्रदेश समितिको निर्वाचनमा कोषाध्यक्ष पदमा पराजय भएका थिए । घिमिरेले संस्थाको बैठकमा केही समय छुट्टाएर उक्त विषयमा छलफल गरिनुपर्ने स्टाटसमा उल्लेख गरेका छन् । उनले गैह्र कलाकार र बिचौलियाहरुले महोत्सवको ठेक्का लिएर ज्युज्यु गर्दै न्युनतम पारिश्रमिकमा जाँदा किन विरोध गरेनौ भन्दै नेतृत्वलाई प्रश्न समेत गरे ।
राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान संस्थागत नभएको उनको आरोप छ । उनले स्टाट्समा भनेका छन्, ‘संस्थाभित्र अधिवेशनका बेला गरेको घात, प्रतिघात, एकले अर्कोलाई गरेको असहयोग, लडाउने, भिडाउने, सिध्याउने लगायतका कुरामा केन्द्रीय नेताहरु, प्रदेश, जिल्लाका साथीहरु सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज, आरोप, प्रत्यारोप गर्दै वादविवाद गरेको देख्दा दुख लाग्यो ।’
यता गैरे किसानले फेसबुकका स्टाटसमा पौष महिनाको मेला महोत्सवमा तिजका गीत घन्किएको आरोप लगाएका छन् । ‘कहिँ नभाको जात्रा हाँडी गाउँमा’ उनले स्टाटस लेखेका छन् ।
नेपाल मात्र यस्तो देश होला जहाँ हरेक चाड एकै महिनामा पर्छन् । बाह्रै महिना पर्ने चाड तीज थियो आज भोलि दशैं पनि थपिएछ । यो पढिरहदा मलाई पागल सम्झिनु भा होला हो म पागल हो । अझ बढी पागल त अहिले मेला महोत्सवमा नाच्ने सुन्ने दर्शकहरु हुन । स्टेजमा मंसिर पुषमा गायक गायिकाले तीजका दसैंका गीत गाइरहँदा दर्शक मजाले झुमी झुमी नाचिरहेका छन् । अब आयोजकलाई दरको व्यवस्था गर्न भन्नुस खाँदै नाच्न हुन्छ । हैन कलाकार ज्यू तीजका दशैंका गीतले मेला महोत्सव धान्ने भएपछि अरु गीतमा किन लगानी गर्नुहुन्छ ? यति बेला सम्झिन मन लाग्यो हाम्रो गौरव साली संस्था दोहोरी गीत प्रतिस्ठान नेपाल तपाई हरु भुत्रोको संस्कृति बचाउन हिड्नु हुन्छ आखिर बिकृती तपाई हरुनै गर्नु हुन्छ । लौन मेरा पनि दुई तीन वटा तीजका गीत छन मेला महोत्सवमा गाउन मन लग्यो पालो पार्दिनुस त ।’ उनको लामो स्टासटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै अर्का बिष्णु बरालले ‘भन्ने बेलामा अग्रजलाई सम्मान नवप्रतिभालाई प्रोत्साहन रे खोइ त नवप्रतिभालाई प्रोत्साहन ?’ भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रश्न गरेका छन् । उनको स्टाट्समा प्रतिष्ठान नारामा मात्रै सिमित रहेको तर नव कलाकारलाई केही नगरेको आरोप छ । उनको स्टाट्समा कमेन्ट गर्दै दोहोरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष जीवन गुरुङले ‘ए विष्णु तिमी कुन दुनियाँमा छौ । नेपालकै सबैभन्दा बढी ठेक्कापट्टा हुने ठाँउमा छौ । यहाँ न नयाँलाई अवसर दिने होइन अकालमा मार्छन भाइ । यहि क्षेत्रमा तिमी भविष्य खोजेका हौ भने अर्कै पेशा पनि अङ्गाल होइन भने उखु किसानको जस्तो हालत बनाउछन् ठेक्दारहरुले होशियार’, भन्दै लेखेका छन् ।
प्रतिष्ठान गण्डकीका अध्यक्ष सुरेन्द्र गुरुङले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आक्रोश पोख्नेलाई संस्थाको विधानअनुसार कारबाही गर्ने बताएका छन् । उनले पनि एक स्टाटस लेख्दै यस्तो भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत तथा प्रतिष्ठान नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिका पदाधिकारी सदस्यज्युहरु, प्रदेश भित्रका जिल्ला अध्यक्ष पदाधिकारी सदस्य ज्युहरु, सल्लाहकार ज्युहरुमा सुचित गरिन्छ । पछिल्लो क्रममा निजी विचार भन्दै प्रतिष्ठानको गतिविधि र नेतृत्व प्रति सामाजिक सन्जालमा राख्नु भएको स्टाट्स तत्काल हटाउन र बाहिरी व्यक्तिले लेखेको स्टाट्समा कमेन्ट नगर्न अनुरोध सहित निर्देशन गरिन्छ । मेला महोत्सवमा स्थान नपाएको झोँकमा संस्थागत मर्यादालाइ भुल्नु भयो भने नेतृत्वको हिसाबले संस्थाको विधि र विधानले मलाइ अधिकार दिए बमोजिम यहाँलाइ संस्थाको जिम्मेबारीबाट समेत मुक्त गराउने जानकारी गराउँदछु । कलाकार हौं कलाकारको इज्जत कलाकारले नै राख्ने हो यहाँहरुको इज्जत आफैंले उडाउँदै हिडेको देख्दा उदेक लागेर यही सुचना मार्फत जानकारी दिन मन लाग्यो । यहाँहरु लाइ पहिला संस्थागत हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । केही संस्थागत गुनासा, नेतृत्वप्रति गुनासा छन भने बस्न तैयार छु तर मेला महोत्सवमा परिएन भन्ने बिषयमा मसँग बस्न आवश्यक छैन आयोजकसँग बस्नुस म सहयोग गर्न तयार छु । धन्यवाद शुभ दिन ।’ यो स्टाटस आफ्नो फेसबुकमा उनले जनवरी ७ सन् २०२० मा पोष्ट गरेका हुन् ।
विहीबार अर्को स्टाटस पोष्ट गर्दै अध्यक्ष गुरुङले यस्तो लेखेका छन्, ‘ आदर्णिय कृष्णकुमार गुरुङ दाइले स्टाट्स मात्र लेखेको भए हुन्थ्यो तर मेलाको तस्बिरनै राखेर ठेकेदार महोदय भनेर सम्बोधन गरिरहँदा दुइ शब्द लेख्न मन लाग्यो । दाइ राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाको दिउँसोको लोक दोहोरी कार्यक्रम राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरि गीत प्रतिष्ठान गण्डकी प्रदेश र कास्की जिल्लाले संयोजन गरेको हो । कुनै ब्यक्ति विशेषले होइन ।
म मेलामहोत्सवमा भैरहेको ठेकेदारी प्रथाको पुर्ण रुपमा अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा छु । यहाँले ठेकेदार भनेर सम्बोधन गरिरहँदा सिङ्गो संस्था प्रतिष्ठानप्रति अपमान गरेको जस्तो लाग्यो । हजुरको भाइ त्यो संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको बेला । अनि कुरा रह्यो गुरुङ साथै जनजाति बहिष्कार गरेको भन्ने । यहाँलाई थाह छ कि छैन यो महोत्सवमा गायिका शर्मिला गुरुङ, राजु गुरुङ , कुमार पुन, शङ्कर बिरही गुरुङ, सिता गुरुङ, मिना गुरुङ, रबि डङ्गोल, ओम गुरुङ, सुरेश राना मगर, सरिता शारु मगर , कल्पना आले, निश्चल थापा मगर, सबिना गुरुङ, पुजा गुरुङ, पार्वती गुरुङ, ज्योति लोहोनी गुरुङ, एल्बिन थापा, प्राप्ति तुलाचन, बसन्ती थापा मगर, जुना श्रीस मगर, दुर्गा गुरुङ, आनन्द बज्राचार्य, दिलु लामा, टस गुरुङ, प्रकाश थापा, माया राना लगायतका कलाकारहरुले प्रस्तुति दिईरहेका छन । अब दाइको नजरमा को छुट्यो सुझाव पाउँ । लोक दोहोरी गायक राजन गुरुङ, गायिका इन्द्रा गुरुङ, काजल गुरुङ लगायत कलाकार देश बाहिर छन् । कुरा गर्न र फेसबुकमा राख्न सजिलो छ दाइ सबै व्यवस्थापन गर्न फेसबुकमा लेखे जति सजिलो छैन । संस्थाले लिदै गर्दा अग्रज अनुज सबैलाइ समेट्दा यहाँहरुले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा थोरै तलमाथि हुन सक्छ चिन्ता नगर्नुस म मेला सकिएपछि हाम्रो प्रतिष्ठानको बैठक बसेर खर्च अनुमोदन गराउँछु अनि आवश्यक परे पत्रिकामा समेत सार्वजनिक गर्न तयार छु ।
अर्को कुरा दाइलाइ जानकारी गराएँ केन्द्रीय कलाकार जति पनि आउँछन ति सबै आयोजकले हामीलाई जिम्मेवारी दिँदै गर्दा सर्त सहित दिएको हुँदा हाम्रो इच्छा भन्दा आयोजकको इच्छाले आएका हुन् । बाँकी रहेका कलाकारलाई समेट्न ठुलो कोशिश गर्दा एक÷दुइ जनालाइ समेटेकै छौं । अब एउटै मेला महोत्सवमा देशभरिका कलाकारलाई समेट्न सम्भव छैन । यो कुरा कलाकारले बुझ्दैन त्यसैले अबका दिनमा नयाँ कलाकार हो भने प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको छ भाग लिन अनुरोध गर्छु । मै हुँ चलेको भन्ने लागेका कलाकारलाइ आयोजकले कार्यक्रमको जिम्मा दिँद गर्दा नाम उल्लेख गरोस हामी संयोजन गर्न तयार छांै । हैनभने फेसबुकमा लेखेर केही हुदैन । मेरो दाइ हजुर मेरो यो क्षेत्रको गुरुजस्तै हो, अग्रज हो म सम्मान गर्छु म अध्यक्ष भएर आएको ५ महिनामै सबै मैले गर्नपर्ने यो कस्तो बिडम्बना हो ? मेला महोत्सव त पहिले पनि हुन्थे किन यसरी मेरो नेतृत्वलाई बारम्बार सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरिएको छ तर दाइलाई पुरा कुरा थाह नभएर हुनसक्छ म नेतृत्व मा रहँदा कसैलाइ काखा कसैलाइ पाखा हुदैन एक दिन सबैको पालो आउँछ अग्रजलाइ सम्मान नबप्रतिभालाइ प्रोत्साह भन्ने नारामा म अडिग छु ।’
गुरुङ चलचित्रका निर्देशक संगीतकार कृष्णकुमार गुरुङले ‘गारो नमान्नु है ठेकेदार महोदय एउटै बेसुरा स्वर दोहोर्याइ तेहेर्याइ गरी दर्शक श्रोताको कान पकाउनु भन्दा त गुरुङ् एवम आदिवासीका सबल कलाकारलाई स्थान दिनु राम्रो हुन्थ्यो नि आयोजक ज्यु । कि गुरुङ, मगर, नेवार, थकाली, थारु, दुरा र दरै भाषको गीत गाउँछन् भनेर हो ? साम्प्रादयिकता भएन र यो त ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।